Cortina, imizuzu emi-5 kuphela ukuhamba ukusuka enkabeni!
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Simona
Ifulethi elincane liyigugu langempela.
Itholakala endaweni yaseCianderies, efunwa kakhulu yilabo abafuna iholide eliphumuzayo ukuxhumana nemvelo.
Kuwuhambo lwemizuzu emi-5 kuphela ukusuka esikhungweni esiyingqopha-mlando, esiteshini samabhasi kanye nemoto yekhebula yase-Faloria.
Ilungele imibhangqwana noma imindeni enezingane, noma iqembu elincane labangane. Yamukela kakhulu ngezesekeli zayo kanye nezingubo zokhuni ngokwesiko le-Ampezzo.
Kusukela kuthala ungajabulela umbono omuhle wamaDolomites.
Ifulethi litholakala esitezi sesibili sebhilidi elincane elinezitezi ezi-4.
Kumamitha-skwele angama-55 kukhona konke okudingayo ukuze uchithe iholide lakho eCortina unenkampani enhle!
Indawo yokuhlala ihlukaniswe yaba yindawo yokudlela enetafula elinwebekayo, elinendawo yokuhlala kanye nosofa ababili abanethezekile abangaba imibhede, i-TV, kanye nethala elincane elibheke iNtaba iFaloria.
Ikhishi lizimele futhi linohhavini, umshini wokuwasha nomshini wokuwasha izitsha.
Igumbi lokulala eliphindwe kabili lifakwe ngesitayela se-Ampezzo elinekhabethe elikhulu kanye namatafula aseceleni kombhede anekhabethe.
Ikamelo lokulala (elingenafasitela) elinombhede owumbhede kanye nekhabethe elincane lilungele ukusingatha izingane ezimbili.
Ekugcineni, emnyango wesakhiwo kukhona indawo lapho ungashiya khona ama-skis akho ngaphandle kokuwayisa ekhaya.
Ngaphandle kwendawo yokupaka engaphandle egcekeni elingaphansi kwendlu, kukhona nendawo yokupaka evaliwe egaraji le-condominium.
Indawo yaseCianderies iwuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka esikhungweni esingokomlando saseCortina kanye nesikwele sesiteshi samabhasi.
Yindawo ekhethekile futhi efunwa kakhulu. Ilungele labo abafuna iholide eliphumuzayo lapho bexhumana nemvelo.
Futhi uhambo lwemizuzu emi-5 yihhovisi le-skypass kanye nemoto yekhebula eholela esiphephelweni sase-Faloria esinemithambeka edume kakhulu kanye nama-ski lifts endaweni.
Ukuhlala eRoma ngeke ngitholakale mathupha ekwamukeleni izivakashi kodwa ngiyohlale ngitholakala nganoma yiluphi uhlobo lolwazi nezeluleko. Ngiyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi isivakashi sizizwe sikhululekile endlini futhi ngenxa yalesi sizathu ngifuna ukukunikeza konke ukutholakala kwami ukuze iholide lakho liphelele ngempela!
KUBALULEKILE: Intela yezivakashi engu-€ 2.00 ngosuku ngomuntu ngamunye ezinsukwini ezi-5 zokuqala ayifakiwe ezindlekweni, ngaphandle kwezingane ezineminyaka engu-12 ubudala kanye nezakhamuzi zikaMasipala waseCortina d'Ampezzo
Ukuhlala eRoma ngeke ngitholakale mathupha ekwamukeleni izivakashi kodwa ngiyohlale ngitholakala nganoma yiluphi uhlobo lolwazi nezeluleko. Ngiyazi ukuthi kubaluleke kangakanani uk…
Inombolo yepholisi: Prot. n. 20180038092 del 18/19/2018